🥇 ▷ Xiaomi Bluetooth Key Finder wuxuu diyaar u yahay Crowdfunding Shiinaha ✅
Xiaomi Bluetooth Key Finder wuxuu diyaar u yahay Crowdfunding Shiinaha
Miyaad tahay nooca qofka badanaa iloobaa furayaashaada? Welwelin, Xiaomi waxay bilaabeysaa baadi goob cusub oo Bluetooth ah oo kaa caawin doonta inaad si fudud u hesho meesha furayaashaada dhib la’aan.
Shirkadda weyn ee taleefannada casriga ah ee Shiinaha ayaa ka furtay Shiinaha Xiaomi Bluetooth Key Finder. Sida la soo wariyey, keychain wuxuu leeyahay astaamo ay ka mid yihiin xasuusin luminta, laba dhinac oo goob wax lagu barto, meeleeyn goobeed, iyo qaab wadareed.
Furaha furaha wuxuu leeyahay a naqshadda gacmo furan oo uu la yimaado a Buzzer-decibel-sare soo jiidashada dareenkaaga. Markaad ka guurto keychain-ka, waxaad ka heli doontaa ogeysiin taleefankaaga oo ku xasuusinaysa inaad wadato keychain-kaaga.
Waxaad ka heli kartaa xitaa taleefankaaga casriga ah soosaaraha furaha ah, waad ku mahadsan tahay laba dhinac oo wada raadinta. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameysid waa riix batoonka furaha furaha si aad u kiciso gambaleelka taleefankaaga casriga ah. Quruxsan fiican, sax?
Iyada oo loo marayo meeleeynta meel kala-qaybsanaanta, waxaad awoodi doontaa inaad ku ogaato meesha ay hadda ku taal furaha wax raadiyaha waqti kasta waqti. Haddii ay dhacdo inaad lumiso furaha furaha, waxaad sameyn kartaa isku day inaad ka hesho meesha ay ka go’day taleefankaaga casriga ah.
Badeecada ayaa hada ku soo badaneysa Shiinaha Qiimaha 99 Yuan oo ah 3 gogo ‘. Majiraan wax macluumaad ah ilaa hada hadii Xiaomi leedahay wax qorshe ah oo ay ugu keenayso furaha furaha suuqyada kale sida India.
Furaha furahaani wuxuu u noqon doonaa nasasho dad badan oo ay ku jiraan aniga inaan isha ku hayo furayaasha aniga oo aan taxadarin. Waxaan rajeynayaa in Xiaomi ay u keento furaha furahaasi India mar dhow Waa maxay fikradahaadu ku saabsan soosaaraha furaha ah? Nala soo socodsii faallooyinka.